Barcelona Oo Go’aamisay Qiimaha Ay Ku Iibin Doonto Tikidhada Kulanka El Clásico Ee Soo Aadan. – Gool FM
(La Liga) 19 Abriil 2018 Kooxda Barcelona ayaa go’aamisay qiimaha ay ku iibin doonto tikidhada kulanka El Clásico, ay ku marti galin doonto kooxda Real Madrid garoonkeeda Cump Nou 6-da May ee soo aadan.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in qiimaha guud ee tikadhada ay gaari doonaan 129 euros, halka qiimaha tikidhadu ay ku kala duwanaan doonaan, kuwa qaar ee ah VIP-da ee ku qiimeysan inta u dhaxeysa 1450 iyo 2270 euros.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Real Madrid ay maanta bilawday iibinta tikidhada ee kulanka El Clásico-da, waxaana mudnaanta koowaad yeelan doona qeybaha kala duwan ay kooxda ka kooban tahay, kadib waxa soo hara ayaa laga iibin doonaa Jamaahiirta.
Si kastaba Barcelona ayaa ku dhow inay ku guuleysato horyaalka La Liga ee dalka Spain xili ciyaareedkan, maadaama ay kooxda reer Catalonia ku hogaamineyso 83 dhibcood, halka kooxda kusoo xigta ee Atlético Madrid oo caawa ciyaareysa ay leedahay 71 dhibcood.
Kooxda Barcelona oo War Farxada ka Heshay Xarunta Tababarka